Dalal Un-ta Ku Taageeray In UAE Bixso Cadaymo Cad Oo Nolosha Amiirad Latifa – Heemaal News Network
Dalal Un-ta Ku Taageeray In UAE Bixso Cadaymo Cad Oo Nolosha Amiirad Latifa
Waaxda Qaramada Midoobay ee Xuquuqul Insaanka ayaa sheegtay inay si isdaba joog ah uga codsatay maamulka Dubai inay u soo bandhigaan cadaymo muujinaya in ay nooshahay amiirad Latiifa. Waxaana taageeray dalabkan cusub dhowr dowladood oo ay ku jirto Boqortooyada Ingiriisku.
Jimcihii, afhayeenka Qaramada Midoobay Marta Hurtado ayaa sheegtay in Isutagga Imaaraatka Carabtu aysan wax jawaab ah ka bixin dalabyada ama aysan sharxin xaaladaha ay ku nooshahay Latifa.
– Maanaan helin wax caddeyn ah oo muujinaya inay nooshahay, waxaanan jeclaan lahayn caddayn cad oo lagu qanci karo inay nooshahay. Ahmiyadeena ugu weyn waa dabcan inaan hubinno inay nooshahay, ayay tiri Hurtado.
Waxay kaloo sheegtay in UN-ka ay isku afgarteen kulan ay la yeelanayaan safiirka Imaaraatka, halkaas oo ay kala hadli doonaan xaalada amiirada.
Princess Latifa, ama Sheikha Latifa bint Mohammed al-Maktoum, waxaa markii ugu dambeysay la arkay 2018. Bishii Maarso, mas’uuliyiinta dalka ayaa sheegay in qoyskeeda iyo xirfadlayaal caafimaad ay ku xanaanaynayaan gurigeeda.
Dhawr cajaladood oo sir ah oo laga duubay, amiiraddu waxay ku andacootay in gurigeeda loo beddelay xabsi, taas oo sababtay in laga hadlo amniga Latifa
Marka laga reebo sawirrada rasmiga ah ee ay daabacday Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraatka, cidina ma arag Latifa tan iyo markaas. Sawirradan, waxay kula jirtaa madaxweynihii hore ee Ireland Mary Robison, oo markii dambe sheegtay in lagu khiyaaneeyey ansixinta xaaladda caafimaad ee Latifa.
Aabaheed wuxuu ku andacooday in qoysku daryeelayo, wuxuuna ku adkaystay in warbixinada walaaca ay yihiin kuwo aan sal lahayn.
Boris Johnson Oo Ka Cudur Daartay Ka Qayb Galka Aaska Amiir Philip
Aas Qaran Oo Gabilay Loogu Sameeyay Murxuun Suldaan Ibraahin Jamac Samatar
“ONLF Ma Jirto Xiriir ay Nala soo Sameeyeen Madaxda TLPF”